Shabaab oo sheegtay masuuliyadda qaraxii Xildhibaan Boorow gacanta uga goay – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Shabaab oo sheegtay masuuliyadda qaraxii Xildhibaan Boorow gacanta uga goay
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerar xalay ka dhacay Muqdisho kaas oo lagu dhaawacay Xildhibaan ka mid ah Golaha shacabka Soomaaliya.
Al-Shabaab waxa ay sheegeen in weerarkaas ay iyaga ka dambeeyeen siina wadi doonaan weerarrada ka dhanka Golaha shacabka Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamed Mursal Boorow ayaa ku dhaawacmay weerar xalay ka dhacay Muqdisho kaddib markii uu ku qarxay qarax lagu xiray gaarigiisa oo ka dhacay agagaarka Madaxtooyada Soomaaliya.
Xildhibaan Mursal ayaa waayay mid ka mid ah labadiisa Gacmood, waxaana lagu dabiibayaa Isbitaal ku yaalla Magaalada Muqdisho.
Qaraxa uu Xildhibaanka ku dhaawacmay waxaa sidoo kale ku geeriyooday Darawalkii Gaariga u waday XIldhibaan Maxamed Mursal.
Previous Masuuliyiin uu kamid yahay ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa habeenimadii xalay isbitaalka waxa ay ku booqdeen xildhibaan Maxamed Mursal booroow oo dhaawac culus uu kasoo gaaray qarax fiidnimadii xalay gaarigiisa loogu xiray.
Next DR, Faarax Cali Shire ayaa maanta magaalada Boosaaso waxaa uu kaga dhawaaqay in uu yahay murashax ut